အီကြာကွေး( Chinese Cruller ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကို Churros လို.ဖော်ပြထားပေမယ့်..လေ့လာကြည့်တော့Churros ဆိုတာ..မုန်.ကြိုးလိမ်လိုလှိုင်းပါတဲ့မုန်.သားဖြစ်အောင်..ညှစ်စက်တစ်ခုကနေပုံစံရယူ၊ကြော်ပြီး..
Icing Sugarလို.ခေါ်တဲ့သကြားမှုန်တွေလူး၊ ချောကလက်
ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦးရဲ.အမေရိကန် နိူင်ငံရဲ.တရုတ်တန်းဈေး ဆိုတဲ့ဆောင်ပါး
မှာအီကြာကွေးကို Crispy Chinese Cruller လို.ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျုံ မှုန်. ..................၂ ခွက်(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ရေ........................၄၀၀ မီလီ လီတာ
မုန်.ပွဆေး( yeast)....၁/၄ ဇွန်း( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
သကြား..................၁ ဇွန်း (............။...........)
ဆား......................၁ ဇွန်း (.............။..............)
ဆီသန်.သန်. ...........၁ ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း)
ဇလုံးကြီးကြီး တစ်ခုမှာ ဂျုံမှုန်. ၊ မုန်.ဖုတ်ဆိုဒါ ၊ ဆား ၊ စတာတွေကို သမအောင်မွှေပေးပါ။
နောက်ဆုံး ရေထည့်ပြီး..ချော မွတ်တဲ့မုန်.သားတစ်ခုရအောင်နယ်ပါ။
ဂျုံ မှုန်.ဖြူးထားသောစားပွဲပေါ်တင်ပြီး..မုန်.သား ကို အညီအမျှ ၂ ပိုင်းခွဲကာ
ညီညာတဲ့..ထု ၊ အလျား ၊ အနံ ဖြစ်အောင်ညှိယူ ပါ။
မိမိနှစ်သက်တဲ့အရွယ်..မုန်.သား ၂ ခုစီလှီးဖြတ်ပြီး..၂ ခုထပ်ကာ ..အ၀တ်စ
(သို.) ပလပ်စတစ်အပါးစ အုပ်ပြီး.. ၄၅ မိနစ်ခန်. အချဉ်ဖောက်ထားပါ။
ဆီပူလာပြီဆို ..၂ ခုထပ်ထားတဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာ ထမင်းစားတူ (သို.)
ချောမွတ်တဲ့ ပွတ်လုံးငယ်ကိုအသုံးပြု ပြီး..လှိုင်းအရာလေး၂ ဖက်လုံးကိုပေး
ပြီး..မုန်.သားကို ဟိုဖက်ဒီဖက်ဆွဲဆန်.ကာ ဆီပူထဲမှာထည့်ကြော်ပါ။
ကြော်တဲ့အချိန်မှာ မုန်.သားအကျက်ညီစေဖို. ကြော်တဲ့တုတ်တံလေးနဲ.လှိမ့်ကာ..လှိမ့်ကာကြော်
အကျက်ညီတဲ့ရွှေအိုရောင်ရပြီဆို...၀ါးဇကာ (သို.) စတီးဇကာထဲမှာဆီစစ်ပြီး
Photo Credit ..Google Search.